Saturday March 21, 2020 - 10:11:08 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Dadkii ugu badnaa ayaa maalin qura cudurka dilaaga ah ee Carona Virus ugu dhintay dalka Talyaaniga taas oo ka dhigan in wadankan uu yahay meesha ugu daran ee caabuqa Carona dadka ku laayay.
War kasoo baxay wasaaradda caafimaadka xukuumadda Roma ayaa lagu sheegay in 24-ki saacadood ee lasoo dhaafay ay dhinteen 627 qof iyadoona dhimashada guud ee Talyaaniga ay gaartay 4032 qof (Afar kun iyo sodon iyo laba qof).
Dowladda Talyaaniga waxay sheegtay in dhimashada ugu badan lagasoo calaamadeeyay isbitaallada kadib markii ay dhinteen Boqolaal bukaan saacado kadib markii uu guuldarraystay qorshihii dowladdu kula dagaallamaysa Virus-kan halista badan leh.
Dadka la ildaran cudurka Carona gudaha dalka Talyaaniga waxay kor udhaafeen Afarta iyo todobo kun oo qof, wariyaasha ayaa soo sheegaya in Talyaaniga uu hadda noqday wadanka ugu badan ee Carona uu ku faafayo wuxuuna ka sare maray Shiinaha oo ahaa meeshii ugu horraysay ee cudurkan uu kasoo bilaawday.
Ururka Midowga Yurub ayaa ku dhawaaqay in uu sameeyay wax walba oo loogu gurmanayo dadka Talyaaniga balse aysan wali ku guulaysan, ciidamada Melleteriga Italy ayaa loo xilsaaray in ay Meydadka dadka halaagsamay ka daad gureeyaan isbitaallada kadibna ay fagaarayaal ku gubaan.
Dhinaca kale inkabadan 172 dowladood ayaa wali ku jiray xaalad bandaw ah waxaana lahakiyay duulimaadyada diyaaradaha iyo socodka dhanka badda, dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in ay xaalad karaantiil ay gelin doonto dadka ku dhaqan 52-da gobol ee wadankaas ka koobanyahay haddii uu sii fido cudurka Carona.
Fadeexad: Shaqaalaha Hay'adaha Q.Midoobay oo kufsaday dad ka badan 60,000 oo qofood WARBIXIN.